Osimiri Ganges: njirimara, mmetọ, osisi na ahịhịa | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | | Nkewa
Otu n'ime osimiri ndị kachasị mkpa na kọntinent Eshia na ụwa bụ Osimiri Ganges. Ọ bụ otu n'ime osimiri e weere dị ka ihe dị nsọ nye okpukpe Hindu, nwere asaa na mkpokọta. Ọ nwere mgbatị nke karịrị kilomita 2.500 wee bido na India ma kwụsị na Bangladesh. Maka nke a, enyere ya aha mba ụwa.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mmetọ, ahịhịa na anụmanụ nke Osimiri Ganges.
2 Mmetọ Osimiri Ganges na Egwu
3 Osisi ala na umu anumanu nke osimiri Ganges
N’agbanyeghi na akụkọ ihe mere eme ya, omenaala ya na ndu ya, osimiri ahu ka bukwara ihe ojoo n’ihi na anarapu ahihia ndi mmadu nke n’eme ka ha gabiga oke osimiri. Nke a na - eme ka ọ bụrụ isi ihe na - akpata mmetọ plastik na oke osimiri.
Dị ka ụlọ ọrụ njem nleta nke dị mkpa maka ego akụ na ụba nke India, Osimiri Ganges bụ otu n'ime akara ngosi maka ndị ala ọzọ. Igwe ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ esi ebu njem site na ebe o si ruo delta bụ otu n'ime ọrụ ndị na-eme ndị njem nleta na-agakarị.
Osimiri a, nke akpọburu Rio Blanco, enweghị agba ya n'ihi mmetọ a wee nye ya akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke dị ugbu a. Zọ ya dị ihe dịka kilomita 2.500 n’ogologo, na nkezi ya bụ cubic 16.648 na nke abụọ, nke nwere ike ịdị iche dịka oge si dị. Mpaghara ahụ dị kilomita 907.000.
Osimiri na-eri nri site na ọtụtụ iyi mmiri, nke ejiri nsị wee pụta, a na-atụle omimi dị n'agbata 16 na 30 m. Ọ bụ ezie na ọ bụghị osimiri kachasị ogologo n’ụwa, ọ bụ osimiri kachasị mkpa na India na 80% nke osimiri ndị dị na India. A na-ekewa ya n'ime obere na ogwe aka buru ibu n'akụkụ dị iche iche nke ụzọ ya, na-eme netwọk dị mgbagwoju anya nke ọwa, nke na-anọchite anya ihe ngosi anya, ma dị n'ọnụ ya.
Ugbu a ọ rụrụ arụ, enwere nje bacteria 1,5 nde na 100 ml, 500 n'ime ha dị mma maka nchekwa ụlọ ịsa ahụ. Na mgbakwunye, nyocha emere gosiri na ọ sachara ihe mkpofu kilogram 545 n'ime oke osimiri. Ejiri Osimiri Ganges mee ka ndị bi na ya nweta ego dị ala na mmiri kwa ụbọchị site na ọwa mmiri na usoro mmiri. Ọzọkwa, e nwere mmiri ozuzo n’okporo ụzọ iji buga mmiri n’ebe ndị ọzọ.
Mmetọ Osimiri Ganges na Egwu
Ọ bụ ezie na a na-ahụta Osimiri Ganges dị ka ebe dị nsọ ma nwee nnukwu akụkọ ihe mere eme, akụ na ụba na njem nleta, Osimiri Ganges metọrọ emetọ. Ndị na-asa ahụ na mmiri ya ụma ma ọ bụ n'amaghị ama amaghị nke a. N'ime mmiri na-emetọkarị anyị nwere ike ịchọta n'osimiri a bụ ndị a:
Enweghị ike ndị mmadụ ịtụfu ihe mkpofu nke ọma
Thelọ nrụpụta dị nso na ndị na-emetọ otu n'ime iyi ndị bụ isi, a na-ebu mmiri na-emetọ mmiri n'akụkụ osimiri niile.
Osisi Hydroelectric na-ekpofu ma na-emebi usoro okike.
Ememme na ememe okpukpe na-awụ ozu ndị a tụbara n'ime osimiri ahụ ma ire ure ha na-emerụ mmiri ahụ.
Na 1980s, mmadụ malitere mkpọsa iji kpochapụ ndị Ganges, mana n'ihi amaghị ihe na oke ịnụ ọkụ n'obi okpukpe nke ndị mmadụ, o nweghi nnukwu mmetụta. N’afọ 2014, a bulitere isiokwu a n’ụzọ siri ike karịa, mana ọ rụpụtaghị ezi mkpụrụ.
Mmetọ bụ nsogbu dị oke njọ nke na-emetụta osimiri, na-etinye ndị na-eji ya na ihe ndị dị ndụ na mmiri ha n’ihe egwu. Agbanyeghị, ọ bụghị naanị ihe na - eyi ndị Ganges nsogbu, ụkọ mmiri na egwupụta egwu na - eyi ya egwu.
Mgbe ụfọdụ, omimi efere a ruru mita 60, ma ugbu a, e meela ka ọ ghọọ mita iri. Emeela mkpọpu ala na imepụta mmiri mmiri iji dozie nsogbu a, mana mmetụta ọjọọ ka na-aga n'ihu.
Osisi ala na umu anumanu nke osimiri Ganges
Site na mmepe ọrụ ugbo nke ọdọ mmiri Ganges, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ahịhịa ọhịa mbụ ya na-apụ n'anya. Enwere ike ịhụ na naanị Robusta Shorea enwewo ike iguzogide elu na Bombax ceiba na ala. Ọnụnọ siri ike nke ụmụ mmadụ na mmetụta ihu igwe na mpaghara a na-egbochi ọtụtụ ahịhịa na-eto. Agbanyeghị, na Ganges Delta, enwere ike ịchọta ebe a na-echekwa mangrove na Sundarbans.
Otu ihe ndị a, ọnọdụ mmadụ na ọnọdụ ihu igwe, na mgbakwunye na mmetọ mmiri, nwere mmetụta na-adịghị mma na ịdị adị nke ụdị anụmanụ na Ganges. Naanị ugwu nke Himalaya na Ganges Delta nwere obere ebe dị jụụ na-enweghị nnukwu ọgba aghara mmadụ kpatara.
Akụkụ elu nke ndagwurugwu ahụ bụ ebe obibi rhinos India, enyí Eshia, agụ agụ Bengal, ọdụm ndị India, mkpọda osisi, na bison. Ugbu a naanị ụdị dị ka anụ ọhịa wolf India, nkịta uhie na Bengal fox na nkịta ọhịa ọla edo nwere ike ịchọta.
N’etiti nnụnụ ahụ, bred, akwa, ọkpa, kpakpando na ọbọgwụ ndị na-akwaga n’oge oyi. Anumanu ndị nọ n'ihe ize ndụ gụnyere anụ mpi anọ nwere mpi, bustard ndị India, obere bustard, na dolphin anụ mmiri mba nke Osimiri Ganges na India.
Anụmanụ nke mpaghara mpaghara dị iche na nke ọma na fauna nke mpaghara elu, ọ bụ ezie na agbakwunyere ụdị dị ka nnukwu Indian civet na ezigbo otter. Bengal agu nwere ebe nchekwa na Ganges delta. A na-eme atụmatụ na ụdị azụ azụ dị na mmiri 350 dị na mmiri ya.
N’etiti anụ ndị na-akpụ akpụ, agụ iyi bụ ndị a ma ama karịa, dị ka agụ iyi ndị apịtị na agụ iyi; na mbe, dika nke nwere akara atọ, nke ojii ojii Indian, nnukwu nnukwute Cantor, mbe na-agagharị agagharị nke India, wdg.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, otu n'ime osimiri ndị kasị ewu ewu n'ụwa na-emerụ emerụ ma na-efunahụ ọtụtụ ihe ndị dị ndụ. Ma site na omenaala ma ọ bụ mmepe akụ na ụba, ụmụ mmadụ na-emetụta usoro okike dị iche iche.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Osimiri Ganges na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Osimiri Ganges
Otu esi ahọrọ teliskop